အားလပ်ရက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အခုချိန်​ဟာ အလုပ်​ပိတ်​ရက်​၊ ​ကျောင်းပိတ်​​ရက်​​တွေနဲ့ ​ပျော်​ရမယ့်​အချိန်​ပါပဲ​နော်​။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ​ခေါင်းတစ်​ခြမ်းကိုက်​​ဝေဒနာသည်​​တွေနဲ့ ​ခေါင်းကိုက်​တတ်​​သ​​တွေတစ်​ချို့​အတွက်​​က​တော့ ဒီအချိန်​ဟာ ​ခေါင်းကိုက်​​ဝေဒနာစတတ်​တဲ့အချိန်​မျိုးပါပဲ။ ဘာ​ကြောင့်​ ဒီလို​ခေါင်းကိုက်​တတ်​သလဲဆိုရင်​…
အရက်​​ကြောင့်​​ခေါင်းကိုက်​တာကို သက်​သာ​စေဖို့ အ​ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက​တော့ အရက်​ကို အသင့်​အတင့်​ပဲ​သောက်​ဖို့ပါ။အ​ကောင်းဆုံးက​တော့ လုံးလုံး​ရှောင်​တာ​ပေါ့။
တကယ်​လို့ ​စိတ်​ပူပန်​ပြီး အစွဲကြီးတတ်​သူ​တွေဆိုရင်​​တော့ အားလပ်​ရက်​က ပိုဆိုး​စေလိမ့်​မယ်​​နော်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ဒီပိတ်​ရက်​မှာ စိတ်​​ပြေ​လျော့​စေမယ့်​ နည်းလမ်း​တွေကို ကြိုးစားလုပ်​ကြည့်​သင့်​တယ်​။
အသင့်​အတင့်​​သောက်​တာက ​ခေါင်းကိုက်​တာကို သက်​သာ​စေနိုင်​​ပေမယ့်​ အများကြီး​သောက်​မိရင်​ ပိုဆိုး​စေတတ်တယ်​ဆိုတာ မ​မေ့ပါနဲ့​နော်​။ ဒါ​ကြောင့်​ ​ကော်​ဖီ​လျှော့ပြီး ရေ​ပြောင်း​သောက်​တဲ့အခါ ​ခေါင်းကိုက်​တာပိုသက်​သာလာတယ်​လို့ ပညာရှင်တစ်​​ယောက်​ကဆိုပါတယ်​။
တစ်​ချို့အစားအ​သောက်​​တွေက ​ခေါင်းကိုက်​တာကို ပိုဆိုး​စေနိုင်​တယ်​​နော်​။ ဝိုင်​နီ​၊ ဘီယာ၊ အချိုမှုန့်​၊ ​ချော့ကလက်​၊ ချိစ်​၊ အသီးအရွက်​အချဉ်​​ဖောက်​ထားတာ​တွေနဲ့ ပါပရိုနီ​၊ ဝက်​​ပေါင်​​ခြောက်​​တွေ၊ အသားလွှာ​တွေလို ပြုပြင်​ထားတဲ့အသား​တွေကို ​ရှောင်​ပါ။ ဟင်းနုနွယ်​၊ တိူဖူး၊ အုတ်​ဂျုံ၊ ​ဘာ​လေ၊ ငါးအဆီ၊ သံလွင်​ဆီ၊ ပဲဖြူ၊ ​နေကြာ​စေ့နဲ့ ဖရုံ​စေ့​တွေများများစား​ပေးပါ။
​ခေါင်းတစ်​ခြမ်းကိုက်တ​တ်​သူ​တွေဟာ သူများ​တွေထက်​စာရင်​ အလင်း​ရောင်​ကို ပိုမခံနိုင်​ဘူး။ ဒါ​ကြောင့်​ ခရစ်​စမတ်​အပင်​​က မီးသီး​တွေကို အကြာကြီးစိုက်​ကြည့်​တာမျိုး မလုပ်​ပါနဲ့။
တစ်​ချို့​တွေအတွက်​​တော့​ ​ရေ​မွေးဟာ စိတ်​ရှုပ်​​စေတာတင်​မကဘူး၊ ​ခေါင်းပါ​ကိုက်​​စေတတ်​တယ်​​နော်​။ အဲဒါ​ကြောင့်​ ​ကိုယ်က ရေမွှေးနံ့တွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တတ်တယ်ဆိုရင် ရှော့ပင်းစင်​တာတွေသွားတိုင်း​ ​ရေ​မွေး​ကောင်​တာ​တွေကို ​ရှောင်​ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
အလုပ်​မသွားရ​တော့​တာ​ကောင်း​ပေမယ့်​ အိပ်​ချိန်​ကို တတ်​နိုင်​သမျှ ပုံမှန်​အတိုင်းဖြစ်​​အောင်​ ထိန်းဖို့လိုတယ်​​နော်​။ ​နေ့လည်​ခင်းထိအိပ်​တာထက်​ ​စော​စောအိပ်​၊ ​စော​စောထတာက ပို​ကောင်းပါတယ်​။
အားလပ်​ရက်​မှာခရီးထွက်​ချင်​သလား? ​လေယာဉ်​နဲ့ခရီးထွက်​တာဟာ ဦး​ခေါင်းခွံဂလိုင်​​ပေါက်​​တွေကို သွားနှိုးဆွတတ်​တယ်​။
တကယ်လို့ ကိုယ်က မကြာခဏထိပ်​ကပ်​နာဖြစ်​တတ်​တယ်​၊ ဒါ​ပေမယ့်​ ​လေယာဉ်​ကလည်း မစီးမဖြစ်​ဆိုရင်​ ​လေယာဉ်​​ပေါ်မတက်​ခင်​ နှာ​ခေါင်းတွင်းအစက်​ချ​ဆေးထည့်​ဖို့လိုတယ်​။
ညဘက်​ကို ​ကောင်း​ကောင်းအိပ်​ဖို့လိုတာ​ပေါ့။ တစ်​ည၆​နာရီ​လောက်​ပဲအိပ်​တဲ့လူ​တွေဟာ ​ခေါင်းပို​ကိုက်​တတ်​လို့ ဒီ့ထက်​ပိုအိပ်​ဖို့လိုပါတယ်​။
အခုခြိနျဟာ အလုပျပိတျရကျ၊ ကြောငျးပိတျရကျတှနေဲ့ ပြျောရမယျ့အခြိနျပါပဲနျော။ ဒါပမေယျ့လညျး ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျဝဒေနာသညျတှနေဲ့ ခေါငျးကိုကျတတျသတှတေဈခြို့အတှကျကတော့ ဒီအခြိနျဟာ ခေါငျးကိုကျဝဒေနာစတတျတဲ့အခြိနျမြိုးပါပဲ။ ဘာကွောငျ့ ဒီလိုခေါငျးကိုကျတတျသလဲဆိုရငျ…
အရကျကွောငျ့ခေါငျးကိုကျတာကို သကျသာစဖေို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ အရကျကို အသငျ့အတငျ့ပဲသောကျဖို့ပါ။အကောငျးဆုံးကတော့ လုံးလုံးရှောငျတာပေါ့။
တကယျလို့ စိတျပူပနျပွီး အစှဲကွီးတတျသူတှဆေိုရငျတော့ အားလပျရကျက ပိုဆိုးစလေိမျ့မယျနျော။ ဒါကွောငျ့ ဒီပိတျရကျမှာ စိတျပွလြေော့စမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို ကွိုးစားလုပျကွညျ့သငျ့တယျ။
အသငျ့အတငျ့သောကျတာက ခေါငျးကိုကျတာကို သကျသာစနေိုငျပမေယျ့ အမြားကွီးသောကျမိရငျ ပိုဆိုးစတေတျတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့နျော။ ဒါကွောငျ့ ကျောဖီလြှော့ပွီး ရပွေောငျးသောကျတဲ့အခါ ခေါငျးကိုကျတာပိုသကျသာလာတယျလို့ ပညာရှငျတဈယောကျကဆိုပါတယျ။
တဈခြို့အစားအသောကျတှကေ ခေါငျးကိုကျတာကို ပိုဆိုးစနေိုငျတယျနျော။ ဝိုငျနီ၊ ဘီယာ၊ အခြိုမှုနျ့၊ ခြော့ကလကျ၊ ခြိဈ၊ အသီးအရှကျအခဉျြဖောကျထားတာတှနေဲ့ ပါပရိုနီ၊ ဝကျပေါငျခွောကျတှေ၊ အသားလှာတှလေို ပွုပွငျထားတဲ့အသားတှကေို ရှောငျပါ။ ဟငျးနုနှယျ၊ တိူဖူး၊ အုတျဂြုံ၊ ဘာလေ၊ ငါးအဆီ၊ သံလှငျဆီ၊ ပဲဖွူ၊ နကွောစနေဲ့ ဖရုံစတှေ့မြေားမြားစားပေးပါ။
ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျတတျသူတှဟော သူမြားတှထေကျစာရငျ အလငျးရောငျကို ပိုမခံနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ ခရဈစမတျအပငျက မီးသီးတှကေို အကွာကွီးစိုကျကွညျ့တာမြိုး မလုပျပါနဲ့။
တဈခြို့တှအေတှကျတော့ ရမှေေးဟာ စိတျရှုပျစတောတငျမကဘူး၊ ခေါငျးပါကိုကျစတေတျတယျနျော။ အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျက ရမှေေးနံ့တှကွေောငျ့ ခေါငျးကိုကျတတျတယျဆိုရငျ ရှော့ပငျးစငျတာတှသှေားတိုငျး ရမှေေးကောငျတာတှကေို ရှောငျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။
အလုပျမသှားရတော့တာကောငျးပမေယျ့ အိပျခြိနျကို တတျနိုငျသမြှ ပုံမှနျအတိုငျးဖွဈအောငျ ထိနျးဖို့လိုတယျနျော။ နလေ့ညျခငျးထိအိပျတာထကျ စောစောအိပျ၊ စောစောထတာက ပိုကောငျးပါတယျ။
အားလပျရကျမှာခရီးထှကျခငျြသလား? လယောဉျနဲ့ခရီးထှကျတာဟာ ဦးခေါငျးခှံဂလိုငျပေါကျတှကေို သှားနှိုးဆှတတျတယျ။
တကယျလို့ ကိုယျက မကွာခဏထိပျကပျနာဖွဈတတျတယျ၊ ဒါပမေယျ့ လယောဉျကလညျး မစီးမဖွဈဆိုရငျ လယောဉျပျေါမတကျခငျ နှာခေါငျးတှငျးအစကျခဆြေးထညျ့ဖို့လိုတယျ။
ညဘကျကို ကောငျးကောငျးအိပျဖို့လိုတာပေါ့။ တဈည၆နာရီလောကျပဲအိပျတဲ့လူတှဟော ခေါငျးပိုကိုကျတတျလို့ ဒီ့ထကျပိုအိပျဖို့လိုပါတယျ။